Nagu saabsan - MIT Shirkadda Adeegga Gawaarida Xaddidan
MAXIMA, xubin ka tirsan kooxda MIT, waa sumadda hoggaamineed ee warshadaha dayactirka gawaarida ganacsiga ee Shiinaha iyo mid ka mid ah saldhigga ugu weyn ee qalabka soo-hagaajinta is-hagaajinta, kaas oo aaggiisa wax-soo-saarkiisu yahay 15,000㎡ wax soo saarkiisuna uu ka badan yahay 3,000 nooc. Khadkeeda wax soo saarku wuxuu daboolayaa wiishka culus ee culus, wiishka culus ee mashiinka, nidaamka iswaafajinta auto-jirka, nidaamka cabbiraadda, mashiinada alxanka iyo nidaamka jiida ilkaha.
Qaadista waajibaadka culus ee Macaamiisha MAXIMA waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha gawaarida kala duwan, saldhigyada dayactirka gawaarida ganacsiga iyo warshadaha adeegga gawaarida gaarka ah, oo loo iibiyo USA, Canada, Australia, Boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska, Netherlands, Spain, Norway, Portugal, Austria, Switzerland, Ruushka, Baraasiil, Hindiya, Chile iwm. 2007dii, MAXIMA wiishka culus waxaa caddeeyay CE. Sanadkii 2015, MAXIMA wiishka culus waxaa cadeeyey ALI, noqdey tii ugu horeysey ee ALI ogolaatey soo saarista culeyska culus ee Shiinaha. Shahaadooyinkaasi waxay sare u qaadaan kalsoonida macaamiisha waxayna ka caawiyaan MAXIMA inay u adeegto macaamiisha gudaha iyo dibaddaba.
Haysashada hal-abuurnimadu waa dabagalka MAXIMA ee aan kala joogsiga lahayn. Sannadkii 2020, wiishka culus ee dhulka korkiisa ayaa la soo saaray ka dib dadaal dheer iyo sidoo kale xaqiijin iyo kormeer soo noqnoqday. Wiishka dhulka hoostiisa ku yaal ayaa sidoo kale si guul leh ku helay shahaadada CE. Intaa waxaa sii dheer, waaxdeena R & D ayaa sidoo kale casriyeeyay tiirarka culus ee wiishka oo si toos ah u shaqeynaya dhaqdhaqaaqa. Waxay noqon doontaa mid aad ugu habboon in lagu dhaqaajiyo tiirarka xoog iyo waqti yar. Shaqadani waxay ikhtiyaar u noqon doontaa alaabada mustaqbalka.
MAXIMA waxay leedahay xarunta dayactirka iyo cabbiraada isku dhaca Gawaarida Gaarka ah R&D Center oo leh rugta R&D ee ugu awooda badan iyo xarunta xogta dayactirka iswada jirka. Ka sokow, MAXIMA sidoo kale waxay leedahay xarunta tababarka ugu hagaajinta iyo hagaajinta gawaarida gawaarida ugu horumarsan. Ku qalabeysan yahay khadka wax soo saarka hogaaminta gudaha, qalabka kormeerka, awooda R & D ee xoogga leh, shaqaale aqoon sare leh iyo nidaamyo kaamil ah, xakamaynta wax soo saarka, tayada, soo saarida iyo adeegga iibka.
Maaddaama ay tahay khabiirka hoggaaminaya adduunka ee xallinta hagaajinta gawaarida ganacsiga iyo xallinta gawaarida shilalka, MAXIMA waxay bixin doontaa qalab iyo qalab ammaan ah, xirfad iyo horumarsan leh, waxay ka caawin doontaa macaamiisha xallinta dhibaatooyinka, kordhinta waxtarka iyo yareynta xoogga shaqaalaha.
Muuqaalka Qolka Muunada